dayniile » Qeybaha kala duwan ee Bulshada oo soo dhoweeyey Waxqabadka Isbitaalka Indhaha Al-Nuur (Daawo Sawirro)
Qeybaha kala duwan ee Bulshada oo soo dhoweeyey Waxqabadka Isbitaalka Indhaha Al-Nuur (Daawo Sawirro)
Qeybaha bulsahada Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhoweeyey howlaha samafal ee uu hayo Isbitaalka Indhaha Al-Nuur oo ka mid ah Isbitaalada ugu waaweyn ee ka jira dalka kaasoo xaruntiisa dhexe ay ku taallo magaalada Muqdisho.
Isbitaalka ayaa ka sokow howlihiisa caafimaad ee caadiga ah dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeysay bixinayey adeegyo caafimaad oo bilaash ah kuwaasoo isugu jiray daweyn iyo qaliimo ay ka faaideysteen dad gaaraya tobanaan kun oo qof oo ku baahsan dalka, isagoo la kaashanaya ururo iyo heyaddo caalami ah.
Qaar ka mid ah dadkii ka faa’iideystay mashaariicdaas ayaa si weyn u amaanay maamulka iyo dhaqaaatiirta Isbitaalka Indhaha Al-Nuur oo ugu horeeyo agaasimaha isbitaalka Dr. C/risaaq Axmed Dalmar.
“Muddo toban sano ku dhow ayaan arragga la’aa, ma heysanin qarash aan isaga bixiyo daweynta indhaha duruufaha dalka jira awgeed, waan quustay, waxaana rumeystay inaan dib dambe nolosheyda wax u arki doonin balse malahaas waxaa meesha ka saaray Dr. Dalmar iyo kooxdiisa oo ii sameeyey qaliin bilaash ah aniga iyo kuwo badan oo ila mid ahaa, haatana wax walba waan arkaa meeshaan doonana waan maraa qeyr ILAAHAY ha siiyo Dr. Dalmar masaakiinta waa u dedaalay” ayey tiri Hooyo Isniino Macalin Maxamed oo tirsan qoysaska ku nool xeryaha barakacayaasha Muqdisho.
Xassan Ibraahim Madey oo ku nool degaano ka tirsan gobolka Jubada hoose, ahna oday 71 jir nasiib u yeeshay inuu ka faaideysto qaliimada bilaashka ah ee uu bixiyey sanadihii la soo dhaafay Isbitaalka Indhaha Al-Nuur ayaa sheegay in Dr. Dalmar iyo kooxdiisa ay mudan yihiin in la siiyo abaal marinta ugu sareysa Qaranka.
“Qorax duhur taagan sacabada laguma qarin karo, waxqabadka Dr. Dalmar iyo isbitaalkiisa ay u galeen bulsahada danyarta ah wax la sheego sheego wey tageen, caalamka dhan ayaa ka dheregsan, runtiina waxaa uu k mid yahay dadka fara ku tiriska ah ee bulshada wax u qabtay xiliyadii adkaa ee la soo maray, waxayna Dr. Dalmar iyo kooxdiisa mudan yihiin in la siiyo abaal marinta ugu sareysa dalka” ayuu intaa ku daray Xassan Ibraahim Madey.
Dadka ka faa’iideystay qaliimada samafalka ah ee uu bixiyey Isbitaalka Indhaha Al-Nuur ayaa waxaa ka mid ah caruur da’ ahaan ka yar 10 sano oo ku dhalatay arag la’aan, kuwaasoo laga saaray rajadii mugdiga aheyd ee mustaqbalkooda soo wajahday, haatana wax la qeybsanaya caruurta asaagood ah.
Isbitaalka Indhaha Al-Nuur ayaa waxaa la aasaasay taariikhdu markii ay aheyd 22-kii bishii Septembar sanadka 2002-dii sida uu sheegay Agaasimaha Isbitaalka Dr. C/risaaq Axmed Dalmar oo intaa ku daray in Isbitaalka Al-Nuur uu ahaa kii ugu goreeyey noociisa ee laga furo koonfurta iyo bartamaha Somalia.
Waxaa uu xusay in shaqada isbitaalka aysan maalina joogsanin, ayna mudada uu jiray ka faa’iideysrteen adeegyada isbitaalka dad aad u fara badan oo dalka ku baahsan.
“Xaaladihii dagaal ee ka jiray Muqdisho isbitaalka wey saameeyeen, waxayna keeneen in illaa shan meelood loo raro, waxaa uu ka shaqo bilaabay xarun ku taala Black sea, ka dibna degmada Heliwaa ayuu u wareegay, ceelasha biyaha oo labo meelood ah ayaa xigay, Heliwaa ayuu dib ugu laabtay ugu dambeyna xaruntan aan hadda ku shaqeyno ee KM-6 ayuu soo degay” ayuu yiri agaasimaha isbitaalka indhaha Al-Nuur.
Isbitaalka indhaha Al-Nuur ayaa ka kooban qeybaha bukaan socodka, Qaliinka, qeybta baarista qalabka kombiyuutarada, qeybta daawada iyo qeybo kale oo ay ka mid yihiin cilmi Baarista iyo tababarada ardayda cilmiga dhaqtarnimada ka barata Jaamacadda Banaadir.
Isbitaalka waxaa uu leeyahay qeyb samafal ah oo la yiraahdo AL-NUUR FOUNATION oo la aasasay 2005-tii taasoo howlo tabarucaad ah ka fulisay gobolada iyo degmooyinka dalka qaarkood si lacag la’aan ah ahna Qaliimo iyo daweyn ugu fidisay bukaano indhaha ka cabanayey.
Agaasimaha Al-Nuur Hospital ayaa sheegay in sanadkiiba ay Afar jeer sameeyaan mashaariicda samafalka ah, ayna gaarsiiyeen Muqdisho ka sokow magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Kismaayo, Gaalkacyo, Buulo Mareer iyo meelo kale, ayna u qorsheysan tahay iney ka fuliyaan magaalooyinka kale ee dalka, waxaana uu intaa ku daray in hawshan ay qayb ka tahay mashruuca wayn ee daryeelka aragga iyo ka hortagga indha la’aanta oo ay ka wadaan Somalia ayna sii wadi doonaan sanadaha soo socda, isagoo xusay in inta ka dhiman sanadkan ay u qorsheysan tahay iney indhaha u fiiqaan dad gaaraya kun qof oo kala jooga Muqdisho Baydhabo.
“Xarunta Isbitaalka waxaa lagu tababaray dufcado badan oo ka baxay Jaamacadda Banaadir, cilmi baarisyo qaarkood lagu soo daabacay jaraa’idka caalamkana waa lagu sameeyey, waxaana u mahad celinayaa heyadaha naga taakuleeyey howlaaheena oo ay ka mid yihiin WHO, Al-Basar International Foundation, Doctors Worldwide, Wasaaradda Caafimaadka, heyadda Mudug Development Organization, dhaqaatiir ajnabi ah iyo kuwo kale oo ay wada shaqeyn naga dhexeyso” ayuu intaa ku daray agaasimaha Isbitaalka Indhaha Al-Nuur.
Dr. C/risaaq Axmed Dalmar waa dhaqtar Soomaaliyeed oo ku taqasusay cudurada arraga (Consultant, Ophthalmoligist), wuxuuna shahaadada dhaqtarnimada ka qaatay Jaamacadii hore ee Ummadda, isagoo helay darajada ugu sareysa oo u suuragelisay in isla kuliyadda ay u qaadato Barre kaaliye muddo lix sanadood ah xiliga burburka ka hor, wuxuuna sidoo kale tababaro badan ku qaatay kuliyadda Caafimaadka kana soo shaqeeyey qeybta indhaha ee isbitaalada Difgeer iyo Afgooye.
Sidoo kale Dr. Dalmar ayaa dagaaladii sokeeye ka dib u wareegay dalka Britain isagoo shahaadada taqasuska ee Masterka ee daweynta iyo qaliinka indhaha ka qaatay Bristol University, sidoo kale waxaa uu ka qaatay Jaamacadda London shahaadada heerka labaad ee Caafimaadka bulshada (Master of Puplic health), wuxuuna shahaadada Phd ee daweynta indhaha iyo maskaxda ku diyaariyey University Collegge London, isbitaalo iyo Jaamacado ku yaalla isla magaalada London ayuuna muddo ka howlgalay.
Dalal kale oo ku yaalla Afrika iyo Aasiya ayuu ka soo shaqeeyey Dr. C/risaaq Axmed Dalmar, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Gambia, Ghana, Ethiopia, Tanszania iyo India, isagoo dhinaca kale Koorsooyin waxbarasho ku soo qaatay dalalka Faransiiska, Maraykanka iyo Jarmalka, dalka ayuuna ku soo laabtay sanadkii 2001, waxaana sanadkii xigay ee 2002-da isaga iyo aqoonyahano kale oo dhaqaatiir u badan ay dhidibada u aaseen Jaamacadda Banaadir oo sidoo kalena uu macalin ka noqday.